अन्तरास्ट्रिय:: Mero Desh
एजेन्सी, बेइजिङ : कोभिड संक्रमण बढेपछि चीनको १ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको शेनझेन सहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । शेनझेनको दक्षिणी टेक हबले सम्पूर्ण बासिन्दा लाई २० मार्चसम्म घरभित्रै बस्न भनेको छ । सो
एजेन्सी : उत्तर प्रदेशको कानपुरमा एक रेल कर्मचारीले रेलबा ट का’टे’र ज्या’न दि’एका छन् । अचम्मको कुरा, श,व आ’धा का’टि’एको केही समय बितिसक्दा पनि कर्मचारी विचलित भएनन् र चु,पचाप ट्र्या,कमा सुते । उनको आँखाबाट आँसु
वीरगन्ज । इन्धन विक्रेताहरुले कमिशनमा कमि भएको भन्दै इ न्धन नउठाएको कारण वीर,गन्जमा पेट्रोल,को कृत्तिम अभाव सि र्जना भएको छ ।नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मू ल्य वृद्धि गरेसँगै इन्धन विक्रेता डिलरवालाहरुले कमिशन नबढा
अन्तराष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजले यस अगाडि पनि एउटा साहित्य कार्यक्रम सफलता को साथ सम्पन्न गरिसकेको छ यस पटक पनि निरन्तरता दिदै नारी दिवशको विशेष अव सरमा” निबन्ध लेखन सुरु गरिए को थियो”उपरोक्त ब्यहोरालाइ आधार मानी
एजेन्सी-एक रुसी व्यवसायीले पुटिनलाई गि’र’फ्तार गर्ने अफि सरलाई पुरस्कार स्वरुप १० लाख डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरे का छन् । रुसका नागरिक एलेक्स कोनानिहिन उनि पूर्व ब्यांकर पनि हुन् । कम्युनिस्ट शा’स’नको अन्त्यतिर उनले रुसमा
काठमाडौं -एक बंगला’देशी सुपरवाइजर’ले एक स्थानी’य युव ती माथि यौन उत्पी’डन गरे’को आ’रोप मा केलंग ते’लोक गोंग स्थित कम्प’नी बाट प’क्राउ गरेको छ ।बंगला’देशी सुपरवाइज र’ले उक्त मले’सियन युवती काम गरि रहेको बेला पछा’डि
भोकाएका रुसि सेनालाइ युक्रेनिहरुले खाना दिए अनि आमा सङ्ग भिडिओ कलमा गफ गराउदै (हेर्नुस भिडिओ)
किभ । बुधबार एक रुसी सेनाले युक्रेनीहरू सामु आ’त्मसमर्पण गरिसकेपछि रुँदै आफ्नी आमालाई फोन गरेको भिडियो यतिबे ला रुस र युक्रेन दुवै देशमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा भर्खरको उमेरका ती रुसी सेनालाई ह,’तियार फालि
विप्लव र भीम रावलबीच भेटवार्ता, एमसीसीविरुद्ध एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान विप्लव आफ्ना पार्टीका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मासँग नेता रावललाई भेट्न उनै निवास पुगेका